खबरदार न्युज - Page2of 19 - News for all
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग माग्यो एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णय (आदेशसहित)
५ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा। कुमार चुडालको इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको भदौ ९ गतेको निर्णयको सक्कल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । त्यस्तै ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चले एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुखको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि मगाएको छ । त्यो दिन सभामुख सापकोटाले छुट्टै दल दर्ता भइसकेको भन्दै कारवाही गर्न
कुलमानविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको माग गरेका थिए । सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो ।
Sep202021 by AdministerNo Comments
केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सुरज कुमार बिष्टलाइ किन जिताउने?
काठमाडौ, ने वि संघ बाट राजनीतिमा खारिएका शुरज कुमार बिष्ट कांग्रेस कंचनपुर क्षेत्र नम्बर2का यूवा नेता हुन्। कंचनपुरमा जन्मिएका बिष्टले शिक्षा क्याम्पस काठमाडौबाट र त्रिभुवन विश्वबिद्यालय बाट राजनीतिशास्त्र र स्वास्थ शिक्षामा स्नाकोत्तर गरेका यूवा नेता हुन । ने वि संघको राजनिती गर्दै शिक्षा क्याम्पसमा स्वतन्त्र बिद्यार्थी यूनियनको सह - सचीव हुँदै २०६५ सालमा सभापति समेत भइसकेका उनी ने वि संघ ११ औं अधिवेशनमा केन्द्रिय सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका बिष्ट राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले क्षमता अभिवृद्धि हुने ठान्दछन। उनै बिष्टसँग कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर महेश जैशिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : कांग्रेस अधिवेशनको जिल्लामा कस्तो चहलपहल छ ? अहिले जिल्लामा कांग्रेस अधिवेशनको चहलपहल बढेको छ । कंचनपुर जिल्लामा वडा समितिको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो, म पनि क्षेत्रीय प्रतिन
नेपाली बजारमा रियलमीका चार वटा मोवाइल सार्वजनिक, मूल्य र विशेषता के छन् ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा रियलमी स्मार्टफोन ब्राण्डका चार वटा मोवाइल फोन सार्वजनिक भएको छ । कम्पनीले सस्तो मुल्यमा आकर्षक मोवाइल फोन रियलमी सी११, रियलमी सी२०, रियलमी सी२१ र फ्लाशिप रियलमी ८ एकैपटक नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । रियलमी सी ११ मोवाइल टिकाउ ब्याट्री र गेमिङ रेडी प्रोसेसर भएका फोन हुन् । रियलमी सी२० भने तीन वटा क्यामरा सहित रहेको छ । यता कम्पनीले रियलमी सी२१ र फ्लाशिप रियलमी ८ पनि नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
संखुवासभाको सामूहिक हत्याकाण्डः लोकबहादुर होइन खड्गबहादुर कार्की मूख्य अभियुक्त
संखुवासभा । संखुवासभाको मादी खोलागाउँमा एकै परिवारका ६ जनाको सामूहिक हत्या प्रकरणमा नयाँ रहस्य खुलेको छ । यसअघि प्रहरीले हत्याकाण्डमा मुख्य आरोपी भन्दै लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सो हत्याकाण्डमा अन्य चारजना आरोपीलाई पनि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । हत्याका मुख्य योजनाकार ४७ वर्षीय खड्गबहादुर कार्की रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थप चारजनालाई सोमबार बिहान सार्वजनिक गरेको हो । हत्या घटनामा २८ वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, ४९ वर्षीय रणबहादुर कार्की र १७ वर्षीय नरेश कार्कीको संलग्नता देखिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । गत २१ भदौमा ८२ वर्षीया पार्वती कार्की, उनका ५५ वर्षीय छोरा तेजकुमार कार्की, ५४ वर्षीया बुहारी मनमाया कार्की, ३२ वर्षीया नातिनी बुहारी रञ्जना कार्की, आठ वर्षी
विपक्षी दल एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधका बीच विनियोजन विधेयक २०७८ बजेट बहुमतले पारित भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक पारित गर्नका लागि लगेको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयक पारित गर्नुपूर्व सभामुख सापकोटाले मन्त्रालय, कार्यालय र सचिवालयगत खर्च शीर्षकमा छलफलका लागि नाम टिपाउनका लागि आग्रह गरेका थिए । विरोधको सूचना दर्ता गराएका नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालबाहेक अन्य सांसदहरुले नाम नटिपाएपछि सभामुखले अर्थमन्त्री शर्मालाई विनियोजन बजेट सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिएका थिए । उनले ३ प्रतिशत बजेट मात्र हेरफेर गरिएको, अध्यादेशबाट आएको बजेटको आकारमा केही घटाएर बजेटलाई यथार्थपरक बनाएको बताए । साथै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका
महेश जैसी, काठमाडौ । सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रयोग गर्न जान्नेहरुका लागि एक सुनौलो अवसर बनेको छ। कसैले टिकटकमा भाइरल हुनकै लागि आफ्नो ज्यानै गुमाए भने कतिपयले त्यही टिकटकको सहि प्रयोग गरेर लाखौँ मात्र होइन करोडौँ पैसा पनि कमाए। त्यसै मध्यको एक उदाहरण हुन सुदुरपश्चिम कन्चनपुरका अन्श बर्मा । उमेरले भर्खरै २२ कटेका अन्श मासिक रुपमा करिबब २५ लाखको हाराहारिमा आम्दानी गर्छन टिकटक बाट। उनले कमाएको पैसाको केही हिस्सा समाजसेवामा पनि खर्छ गरेका छन। टिकटक बाट पनि मनग्ये आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो देखाइ सयौँ नेपालिलाइ उक्त बाटोमा डोर्याउने अंश बर्माले टिकटक बाटै कमाएको पैसाले महेन्द्रनगर मा एउटा घर र सुन्दर गाडी समेत किनिसकेका छन। अध्यानको हिसाबले कानुन संकायको स्नातकोत्तर पहिलो बर्षमा अध्यानरत अन्शलाइ मन नपाराउने साहेदै होलान। उनको बोल्ने शैली र गिफ्टरलाइ लाइभ मा आकर्षण गर्नसक्ने क्षमताकै कारण
संविधान दिवसमा माइतीघरमा राजावादीको झाँकी प्रदर्शन
काठमाडौं । सातौं संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा झाँकीसहितको प्रदर्शन गरेका छन् । राजावादी दल र त्यसमा आवद्द भएकाहरुले २०४७ सालको राजासहितको संविधान पुनः ब्यूँताउनुपर्ने मागसहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् । यस्तै उनीहरुले नयाँ संविधान हिमाल,पहाड र मधेस सबै जनताका लागि सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
संसद विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशहरु विभूषित प्रचण्ड पत्नीलाई पनि पदक
३ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशले प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पाएका छन् । अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले यो पदक पाएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषण र र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पदक पाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा रहने सबै न्यायाधीशहरु पदकबाट विभूषित भएका छन् । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पनि यही पदक पाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)की पत्नी सीता दाहाललाई पनि राजनीतिक अभियन्ता भनेर चितवनको ठेगाना राखी यही पदक दिइएको छ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, पूर्व प्रदेश प्रमुख तिलक परियार